Madaxweyne afrikan ah oo 31 sano kadib mar kale doonaya in la doorto oo tartamaya. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweyne afrikan ah oo 31 sano kadib mar kale doonaya...
Madaxweyne afrikan ah oo 31 sano kadib mar kale doonaya in la doorto oo tartamaya.
Clement Abaifouta oo ah guddoomiyaha ururka la magac baxay ‘dhibbaneyaasha dambiyadii madaxweynihii hore ee Hissene Habre” ayaa wariyaha VOA James Butty u sheegay in dadka reer Chad ay maalin kasta sameeyaan dibadabaxyo, kuwaas oo ay ku dalbanayaan in hannaanka doorashada wax laga badalo, iyadoo dadka qaar ay xitaa diideen inay qaataan kaararka codbixinta.
Previous articleMidoowga Musharaxiinta oo Fashilka Shirka Afisooni dusha u saaray Farmaajo
Next articleFarmaajo labo bilood ayuu sharci daro ku dhex fadhiyaa Villa Soomaaliya. Labo mid ayuuna ku dambeyn doonaa
Hay'adda Xuquuqda Aadanaha ee Amnesty International qeybteeda Bariga Afrika ayaa loogu baaqay DFS inay xaqiijiso in caddaaladda la horgeeyo Cabdirashiid Janan' oo maanta la...
Madaxweyne ku xigeenka galmudug oo shir gudoomiyay shirka amniga doorashooyinka...
Taliyaha Ciidamada Dhulka “ Janaraal Saadaq Joon waxa uu ka mid...